Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Iimpahla zentengiso » Iindawo zokugcina amanzi » UG » Ummandla oMbindi » Kampala » Indawo yokuhlawula irente ku-Ntinda1
Sineemitha ezingama-25000 zeemitha zokugcina iindawo zokugcina iimpahla kwindawo yeNdawo / Ntinda / Banda. Ezi ndawo yokugcina izinto zilungele iifektri, ifenitshala, iimveliso zococeko, iimveliso zokutya, iikhemikhali, iziselo, iimoto kunye nezinto ezithengiswayo ngokubanzi.
Sinobukhulu obahlukeneyo obahlukeneyo bezindlu zokugcina iimpahla kwisitrato sokuqala, esitratweni lesi-1, isitrato sesi-5 kunye nesitrato sesi-6 kuyo yonke indawo yendawo yemveliso, eKampala. Iqela lethu lokulungisa izindlu lincedisa ekuqinisekiseni ukuba iziko ligcinwa ngokufanelekileyo kwimigangatho ephezulu ngaphakathi nangaphandle. Sizabalazela ukwamkelwa njengenkampani ephezulu yolawulo eKampala ngamaziko ethu okugcina iimpahla.
I-Real Estate yeMusbon inekratshi ephezulu ekunikezeni iindleko kunye nobungakanani bezisombululo ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zethu zabathengi. Sinikezela ngeprayorari yaseUganda yaseUganda, ukuzalisekisa, igumbi lokubonisa kunye nezisombululo zeofisi ezigxininisa uluhlu lwakho lweempahla ngaphakathi kokufikelela ngokulula kwesixeko.
Siyazi ukuba indleko zokugcina impahla ephezulu ziphezulu kwindawo yemizi-mveliso, eKampala. Nangona kunjalo, sithelekisa nayiphi na intengo ngaphandle ngelixa sikunika amandla esigaba sesithathu, ukugcinwa okungcono, indawo efikelelekayo, ubukhulu obuguquguqukayo kunye nokhuseleko ngokubanzi.
+ 25675192xxxx bonisa
Ibhaliswe kwi-22. I-Nov 2019
Nxibelelana nentengiso + 25675192xxxx
Ibhaliswe ngoNovemba 22, 2019